नेपाली फिल्मको कथा गतिलो हुनुपर्‍यो : रामकुमारी झाँक्री
के पाउनुभयो राजनीतिमा लागेर? समाजलाई चिनेँ। सम्बन्धहरू बनाएँ। धेरै चिजहरू बदल्ने अभियानमा सरिक हुन पाएँ। कति भयो राजनीतिमा लाग्नुभएको? भयो २३ वर्ष जति।
'छाडा गाउने र सुन्ने दुवै दोषी'
लोकगायिका पूर्णकला बीसी छोटो समयमा उदाएकी प्रतिभा हुन्। गायनलाई 'करिअर बनाउँछु' भनेर होमिएको छ वर्षमै उनी चर्चित लोकदोहोरी गायिकाको पंक्तिमा उभिइसकेकी छिन्। विशेषगरी पछिल्लो तीन वर्षयता उनको व्यस्तता बढेको छ।...
गजब कतिसम्म छ भने सेक्स उद्योग र चलचित्र उद्योग दुवैलाई मनोरञ्जन उद्योग भनेर मान्नेहरू पनि छन्। पत्रपत्रिकामा पनि धेरैले चलचित्रलाई मनोरञ्जनकै क्षेत्र मान्छन्। यो हो पनि। चलचित्रमात्रै किन, कलाका सबै रूपहरू मनोरञ्जनकै क्षेत्र हुन्। सङ्गीत मनोरञ्जनको क्षेत्र हो, नृत्य मनोरञ्जनको…
रंगमञ्च हुँदै फिल्ममा उदाएका अभिनेता हुन् नाजिर हुसेन। रंगमञ्चमा उनको नाटक हेर्न पुग्नेहरू उनलाई 'अभिनयको जादुगर'सम्म भन्न भ्याउँछन्। मधेश र मधेशीलाई नेपाली फिल्मले बेवास्ता गरिरहेकै बेला उनी लगातार मधेशी चरित्रमार्फत फिल्ममा प्रमुख भूमिकामा देखिँदै छन्। उनले अभिनय गरेका नाटक 'माथा…
केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अचेल?भर्खरै नयाँ म्युजिक भिडियो 'नाइलनको सारी' सार्वजनिक गरेको छु। यसैको 'प्रमोसन'मा दौडिरहेको छु।कस्तो गीत हो 'नाइलनको सारी'?यो लोक 'फ्युजन' भएको गीत हो। यसमा मौलिक लोक धुन छ। अहिलेका दर्शक/स्रोताको रोजाइलाई ध्यानमा राखेर ल्याएको गीत हो।
म बसेको सानो शहरमा पहिलो पल्ट सिनेमा आयो। त्यसबखत सिनेमालाई 'बाइसकोप' भन्दथे, किनकि प्रदर्शन कालमा बाइस पटक मध्यान्तर हुन्थ्यो र प्रत्येक मध्यान्तरमा सिनेमाका कारिन्दाहरूले दर्शकहरूको कोप सहनुपर्थ्याे। गरिब बाइसकोप पनि के गरोस्? उसित छवि देखाउने एउटै मेसिन हुन्थ्यो।
नीति तथा कार्यक्रमः गफको पार्सल
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाउनुपर्ने विषयहरू ओझेलमा पारिएका छन्। यसअघिका सरकारले जस्तै यसपटक पनि जनतालाई अलमलमा पार्ने चिल्ला कुरा गरेर वर्तमान सरकार जनपक्षीय देखिने धुनमा जुटेको देखिन्छ।
मान्छेले जंगलदेखि महलसम्मको यात्रा पार गर्न हजारौँ साल लगायो। यति लामो अनुभव र अभ्यासले समाज, छरछिमेक र इष्टमित्रको आश्यकता र अनिवार्यतालाई सिद्ध गर्योा। छिमेक भएन भने बस्न सकिन्न। आफन्त भएनन् भने जीवन स्वादिलो हुँदैन। तर, संसारमा सवैभन्दा तनाव पनि छिमेकी…
नयाँ संविधान जारी हुने क्रममा नेपाली कांग्रेसले आफू सत्ताको नयाँ समीकरणमा नअट्ने र पछाडि धकेलिने संकेत पाइसकेको घटनाक्रमले प्रस्ट्याएका छन्। संविधान जारी गर्ने मिति केही समय पछि सार्ने कांग्रेसको इच्छा पूरा हुन सकेको थिएन। त्यसले उसको आकलनलाई बल पुर्‍याएको हुनुपर्छ।…
जो पनि मोडल !
कुनै गीत तयार भएपछि त्यसलाई आम दर्शक र स्रोतामा पुर्याउन म्युजिक भिडियो बनाउने गरिन्छ । गीतको भाव र सन्देशलाई दृश्यमा उतार्न सक्ने क्षमता भएका कलाकारलाई भिडियोमा अभिनय गराउनुपर्ने हो । तर, भद्रगोल यहीँनेर भइरहेको छ । म्युजिक भिडियो विकृतिको क्षेत्र…
म्युजिक भिडियोमा व्यस्त मोडल हुन्, वर्षा राउत। तीन वर्षमा उनले ८० भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी छिन्। भिडियोबाट पाएको लोकप्रियताकै कारण उनले फिल्म 'नाइँ नभन्नू ल–४' मा काम गर्ने मौका पाइन्। फिल्म '६क्का ५न्जा'मा पनि उनले अभिनय गरेकी छिन्।…